Akụkọ - Kwuo mmiri mmiri karama na microplastics
Satọde a, 18nkeSeptemba, mkpọsa zuru ụwa ọnụ ga -abịa ọzọ: Ụbọchị nhicha nke Clean Up the World haziri. Ebe Nne Nature nwere ikike dị nta maka ihicha onwe ya, mmemme a bu n'uche inye aka na mbara ala site na omume gburugburu ebe obibi dị iche iche. Ọhụụ a bụ ịkwalite ọtụtụ ijeri mmadụ ka ha tụgharịa aka uwe ha wee deba aha ihe ọ bụla dị mma ha nwere ike ime. Ọbụnadị obere ihe nwere ike ime ụwa mgbanwe!
A na -eme mmemme nchacha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo niile. Ebumnuche bụ isi bụ ịlụso nsogbu mkpofu siri ike na nsogbu irighiri mmiri mmiri. Mpekere mmiri na -emetụta echiche osimiri na ahụike nke gburugburu ebe obibi mmiri, nke n'aka nke ya na -emetụta akụ na ụba mmiri. Enwere ike ịsacha iberibe mmiri dị otú ahụ n'ụsọ mmiri dị ka ebili mmiri. Ya mere, mkpofu ahịhịa n'akụkụ osimiri so n'etiti ụdị mmemme nhicha niile dị mkpa.
(Isi Iyi: ụwacleanupday.nl)
(Isi Iyi: unsplash.com)
Mmiri karama n'ebe niile! Ọtụtụ ahịhịa dị n'akụkụ osimiri bụ mmiri karama. Ụwa na -emefu ihe karịrị ijeri dọla 100 na mmiri karama kwa afọ. Ebe ọ bụ na a naghị emegharịgharị ya, ezigbo ọnụ ahịa mmiri na ihe okike karịrị ihe anyị chere. Ndị ọrụ nyocha echegbuola onwe ha maka nnukwu ihe egwu microplastics nwere maka ahụike mmadụ dịka ọmụmụ gosiri na mmiri karama nwere microplastics. Ojiji mmiri karama pụtara nnukwu oriri microplastics.
(Isi Iyi: statista.com)
Dị ka infographic nke statista.com na -egosi, isi iyi microplastics nke na -abanye n'ahụ anyị bụ mmiri karama. Ma ị tapụ mmiri pọmpụ agaghị aka mma… Azịza ya? Ihe nzacha mmiri ọ drinkingụ drinkingụ! Teknụzụ nzacha azụ osmosis bụ ezigbo ihe ngwọta iji chebe megide microplastics n'ime mmiri gị ka ọ na -ewepụ ihe niile ruo mgbe ọ nweghị ihe fọdụrụ ma ọ bụghị H2O.
Kedu ihe bụ osmosis ntụgharị?
Mgbe ihe mkpuchi dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-ekewa nnu dị iche iche, n'ụzọ nkịtị, mmiri ahụ ga-esi na ihe ngwọta nke akụkụ ala ala gbadara agbada gaa na nke mgbatị dị elu iji chọọ nha anya, ruo mgbe mkpokọta dị n'akụkụ abụọ nke akpụkpọ ahụ. nha anya.
Usoro a agaghị achọ ume ọ bụla iji mee. Ma ọ bụrụ na anyị emee ihe megidere ihe anyị kọwara ugbu a, ọ ga -ewe ike. Ị ga -etinyekwu mgbali n'akụkụ dị elu ka etinyere iji merie ebumpụta ụwa ma mee ka mmiri na -asọfe gafere n'obere mkpanaka akpụkpọ ahụ wee nweta mmiri dị ọcha. Teknụzụ ejiri mee ihe a ka a na -akpọ ọgwụgwọ mmiri osmosis.
RO bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji wepu mmetọ na mmiri ma melite ogo mmiri. Gaa na ndepụta ngwaahịa anyị ka ịchọtaNgwaahịa RO ọhụrụ ma ọ bụ karịa atụmatụ ngwọta mmiri ọ drinkingụ drinkingụ Teknụzụ RO ime mgbanwe. Taa anyị na -ebi n'ime ụwa jikọtara ọnụ karịa mgbe ọ bụla ọzọ, na onye ọ bụla kwesịrị isetịpụ ihe nlereanya ka ndị ọzọ gbasoo. Sị mba mmiri karama. Sị mba maka plastik. Ị ga -enyere aka kwụsị mmetọ mmiri, nsogbu mmiri, na ọbụna mgbanwe ihu igwe!
Nnọchi Ihe Njikere Njikere Mmiri, Kpatụ sistemụ nzacha mmiri, Njikere nzacha, Mmiri na -asacha mmiri Maka mmiri siri ike, Sistemụ osmosis kacha mma, Ụlọ na -asachacha mmiri n'ụlọ,